जनकपुर र काठमाण्डौंमा फिट भएको म कतारमा किन अनफिट भएँ सरकार ? जवाफ चाहियो
Wed, Apr 25, 2018 | 08:31:50 NST
12:21 PM (1 year ago)
विनोद माझी, सर्लाही
मेरो घर सर्लाही जिल्लाको संग्रामपुर गाविसमा छ । म गरिब परिवारको सदस्य हुँ । गाउँका धेरै मान्छेहरु विदेश गएपछि मैले पनि विदेश जाने सोच बनाएँ । घर परिवारसँग सल्लाह गर्दा सबैले सहमति जनाउनुभयो । अनि म विदेश कसले पठाउँछ भनेर गाउँतिर बुझ्न गएँ । मेरो भेट हरिपुर्वाका ललिन्द्र राय यादवसँग भयो । उनले मलाई विदेश पठाईदिन्छु भनेर काठमाडौंको गौशालामा रहेको मिथिला म्यानपावरमा सम्पर्क गराए । म्यानपावरले मसँग सबै कुरा बुझ्यो र मसँग पासपोर्ट लियो ।
भिसा आएपछि एजेण्ट ललिन्द्रले मेडिकल रिपोर्ट ल्याउनु भन्यो । म जनकपुरमा गएर मेडिकल गराएँ र त्यसको रिपोर्ट लिएर म्यानपावरमा गएँ तर जनकपुरमा गरेकोले हुँदैन भनेर म्यानपावरले रिलायवल पोलिक्लिनिक एण्ड प्याथोलोजी ल्याबमा मेडिकल गराउन भने पछि त्यही गएर मेडिकल चेकजाँच गराएँ । त्यसपछि रिपोर्ट लिएर म्यानपावर गएँ । सबै तयारी पूरा भएपछि मलाई म्यानपावरले लेवर भिषामा २०७३ मंसिरमा कतारको डेनसिटी प्रोजेक्ट सर्पोट कम्पनी प्रालिमा पठायो । त्यहाँ गएर मैले २ महिना ९ दिन काम गरें । त्यहाँ मलाई काम गरेको कुनै तलब पनि मिलेन काम पनि दैनिक १७ घण्टा लगाउँथ्यो । २ महिनापछि कम्पनीमै सबै कामदारको मेडिकल चेकजाँच भयो । तर मेरो मेडिकल रिपोर्ट अनफिट देखियो । म झसङ भए । म छक्क परेँ । जनकपुर र काठमाण्डौंमा फिट, कतारमा चै किन अनफिट ?
मेडिकल अनफिट भएपछि मलाई कम्पनीले काम गर्न दिएन । घर जा भन्यो । मैले म्यानपावरमा फोन गरें तर फोन नै उठेन । मैले धेरै पटक फोन गरें तर पनि फोन उठेन । मैले एजेण्टलाई पनि फोन गरे उसले पनि फोन उठाएन । त्यसपछि त अलपत्र परें । मैले परिवारलाई सबै कुरा भनें । परिवारले नै पैसा पठाए पछि म नेपाल फर्किएँ । यहाँ आएर म सीधै सूचना केन्द्र मलङगवामा गएँ । त्यहाँ गएर क्षतिपूर्तिको लागि एजेण्टको विरुद्धमा उजुरी दर्ता गराएँ । सूचना केन्द्रले उजुरी प्रहरीमा दर्ता गर्न मदत गर्‍यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले संग्रामपुर प्रहरी चौकीलाई पत्र काटेर पीडित र पीडकलाई राखेर कुरा मिलाउन भन्यो । संग्रामपुर प्रहरीले भने एजेण्टको कुरा सुनेर हुन्छ हुन्छ तपार्इंले न्याय पाउनु हुन्छ मात्रै भनि रहेको छ । मलाई गाह्रो भइरहेको छ । यता साहुले पैसा मागेर हैरान गरेको छ । मैले सुनेको छु अब मेडिकल अनफिट भई विदेशबाट फिर्ता आउनु परेमा सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिन्छ । तर क्षतिपूर्ति लिन कहाँ जाने भन्ने कुरामा पनि म अलमल परिरहेको छु ।
मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि नेपालमा सबै कुरा फितलो र कमजोर छ । यहाँ सिस्टम नै छैन । यहाँका पुलिस प्रशासनदेखि लिएर ठुला ठुला सरकारी निकायले पनि राम्रो काम गर्दैनन् । मेरो प्रश्न छ म नेपालमा दुई दुई ठाउँमा मेडिकल चेकजाँच गर्दा फिट भए कतारमा कसरी अनफिट भएँ ? यसको जवाफ छ सरकारसँग ? छ भने मलाई दिनुपर्‍यो ।
हैन भने त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजत दिनु भनेको राजस्व बढाउने खेल मात्रै हो । मेडिकल अनफिट भएर केहीदिन अघि पनि संग्रामपुरमा सुरेश महरा पनि विदेशबाट फर्केर आयो । अब केहीदिनमा अरु ४/५ जना साथीहरु पनि आउँदैछन् । साँँच्चै भन सरकार त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजत दिएर कति पैसा कमायौ ? हैन भने विदेशमा गरिने मेडिकल र नेपालमा गरिने मेडिकल किन फरक हुन्छ ? स्वास्थ्य जस्तो कुरामा सोझा नागरिक खेलवाड गर्ने ? यदी म नेपालमै अनफिट भएको भए हुन्थ्यो । त्यसो भएको भए विदेश नै जान्न थें । विदेश जान लागेको पैसाले यही केही गर्थे होला । तिमीले ईजाजत दिएको स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल गरेर फिट भएर म विदेश गएँ । अहिले हेर त उता पुगरे अनफिट भएर आएँ अब मैले विदेश जाँदा गरेको ऋण कसरी तिर्नु ? मेरो परिवारलाई कसरी पाल्नु ? मलाई न्याय चाहियो सरकार ।
(सहयोगी समाज नेपाल, हरिवनद्वारा सञ्चालित सूरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्रका परामर्शकर्ता सोम दियालीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)